Ny Xiaomi Mi Note 10 dia havoaka amin'ny faran'ny volana oktobra | Androidsis
Ny Xiaomi Mi Note 10 dia hanomboka amin'ny faran'ny volana oktobra
Xiaomi dia niavaka, nandritra ny taona maro, ho iray amin'ireo mpanamboatra finday avo lenta manerantany izay manavao ny repertoire-ny finday, ary izany no hataony amin'ny andiany Mi Note, satria afaka andro vitsivitsy dia hanary ny Mi Note 10, fantsom-pahombiazana avo lenta - mety- izay ho toeran'ny fianakaviany.
Raha tsiahivina, tamin'ny volana Jona tamin'ity taona ity, ny CEO Xiaomi Lei Jun dia nanambara fa tsy hanohy handefa ny andian-telefaona finday Mi Note sy Mi Max ny orinasa. Na izany aza, mpampilaza vaovao mahatoky avy any Shina no nilaza izany Xiaomi dia mety hanangana ny andiany Mi Note amin'ny alàlan'ny fandefasana ilay maodely voalaza etsy ambony amin'ny faran'ny volana oktobra.
Mampalahelo fa ilay mpampahalala - izay namoaka ny tatitra tamin'ny kaonty Ice Universe tao amin'ny Twitter - tsy namoaka antsipirihany momba ny antsipirihany momba ny Xiaomi Mi Note 10. Na dia feno finday voalohany aza ny telefaona Mi Note voalohany sy faharoa, ny Mi Note 3 dia telefaona ambony afovoany. Na izany aza, Mi Note 10 dia andrasana ny laharam-pahamehana amin'ny maha-flagship fitaovana azy. Noho izany, inoana fa hanolotra ny Snapdragon 855 Plus ambanin'ny hood.
Raha izany dia hiatrika fitaovana iray koa isika izay hampita tontonana OLED na AMOLED mihoatra ny 6.5 santimetatra amin'ny diagonal. Tadidio fa, satria maodely "Note" izy dia mazàna lehibe. Na eo aza izany, ny sisin-tany manodidina ny efijery dia ho kely tokoa, satria ny fironana finday voalohany no manamarika azy. Mandritra izany fotoana izany, ny rafi-tsary izay hireharehany dia tsy ho feno sensor kely fakantsary telo ao aoriny.
Ny sainan'i Xiaomi manaraka dia afaka nandrakitra horonantsary misy vahaolana 8K
Tena manantena izahay fa hitohy ity andiany ity ary tonga ny Xiaomi Mi Note 10, saingy azo inoana fa holavina izany fampahalalana izany na koa mainka aza, tsy raharahian'ny orinasa ary ny smartphone dia tsy hatolotra amin'ny andro ho avy. Mbola ho hitantsika ny fivoaran'ny fahamarinan'io voalaza mialoha ...
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Ny Xiaomi Mi Note 10 dia hanomboka amin'ny faran'ny volana oktobra
ZTE Blade A7s: finday vaovao misy ny marika sinoa
Google Tasks dia manampy maody maody maizimaizina